भारतले नेपालसँग वार्ता गर्ने सम्भावना न्यून - Dainik Online Dainik Online
भारतले नेपालसँग वार्ता गर्ने सम्भावना न्यून
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७७, सोमबार ५ : ३५
काठमाडाैं । नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने दुई विज्ञले तत्कालै नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका विषयमा वार्ता हुने सम्भावना नभएको बताएका छन्।
प्राध्यापकद्वय श्रीधर खत्री र ध्रुव कुमारले संविधान संशोधनपछि सीमा विवाद अप्ठेरो चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन्।
केही पहिले भारतीय रक्षामन्त्रीले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लालाई नेपालले दाबी गरेको भूभागमा लिपुलेकसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई अद्यावधिक गरेको थियो।
नेपालको नयाँ नक्सालाई नयाँ दिल्लीले काठमाण्डूका तर्फबाट ‘कृत्रिम रूपमा गरिएको भूमि अतिक्रमण’को सङ्ज्ञा दिएको छ।
संविधान संशोधनपछि अब के?
उनले भने, “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नक्सा पारित गरेर हामीले दह्रो राजनीतिक अभिव्यक्ति दियौँ।”
“हामीले राष्ट्रपतिलाई उक्त संशोधन विधेयक हस्ताक्षर नगर्न अनुरोध गरेर दह्रो कूटनीतिक सन्देश पनि दिन सक्थ्यौँ र त्यसले वार्ताको ढोका खोल्न पनि सक्थ्यो।”
“तर हाम्रोमा देश भावनात्मक मनस्थितिमा रह्यो र हामीले तार्किक र युक्तिसङ्गत छलफल गर्न सकेनौँ। संविधान संशोधन गरेर हामीले समस्याको पोको खोलिदियौँ।”
उनी भन्छन्, “संविधान देशको लागि पवित्र दस्तावेज हो र यसका प्रावधान अन्य कुनै देशसँगको लेनदेनको विषय बनाइनुहुँदैन।”
राजनीतिशास्त्रका अर्का अवकाशप्राप्त प्राध्यापक ध्रुव कुमार पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाल ‘पछि हट्न नसक्ने अवस्थामा’ पुगेको बताउँछन्।
उनले भने, “सम्भवत: यही कारणले भारत नेपालसँग वार्तामा बस्न पनि इच्छुक छैन।”
“तर पहिला पनि उसले यस्ता प्रक्रियालाई लम्ब्याउने गर्दै आएको थियो। यसको प्रभाव वार्ताको टेबलमा बसेर एउटा सम्झौतामा नपुगुन्जेल गतिरोधको अवस्था कायम रहिरहनसक्छ।”
चीन-भारत झडपको प्रभाव कस्तो पर्ला?
उनी भन्छन्, “सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धपछि पञ्चायतसँग हिमचिम बढाएजस्तै गरी चीनसँगको तनावका कारण भारत नेपालको भौगोलिक दाबीप्रति नरम हुन्छ भनेर हामीले सोच्नुहुँदैन।”
सरकारी अधिकारीहरू के भन्छन्?
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई भन्छन्, “नेपाल सरकारबाट सबै किसिमका पहलहरू भइरहेको छ। औपचारिक अनौपचारिक सबै माध्यमहरूलाई खुला गरिएको छ।”
उनले थपे, “उहाँहरूसँग सम्पर्क कायम गर्न हाम्रो तर्फबाट कोशिस भइरहेको छ। वार्ता हुनुपर्छ र हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ।”
उनी भन्छन्, “मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा रहँदा दूरी बढेको र आफूले चुनौती खेप्नुपरेको भारतीयहरूले महसुस गरेका छन्। यस्तोमा लेनदेन गर्दा त्यसले ओलीलाई बढी लोकप्रिय बनाउन सक्छ जुन उनीहरूले नचाहन सक्छन्।”
“अहिलेको सरकार हुँदा नै (नेपालको) चीनतर्फ ढल्कने इच्छा विगतमा भन्दा सबैभन्दा बढी प्रकट भएको छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा रहुन्जेल भारतले नेपालसँग वार्ता गर्दैन।”